Jaakada madow, kaarka duurjoogta ah sidoo kale jiilaalka | Bezzia
Blazer madow, kaarka duurjoogta ah sidoo kale xilliga qaboobaha
Blazer-ka madow waa mid ka mid ah qaybaha dharka ee aan soo galin kana soo bixin labbiskayada marka xilligu isbeddelo. Jiilaal iyo xagaa labadaba waanu ka faa'iidaysanayna xataa haddaynu siyaabo kala duwan u samayno. Waana in xilliga jiilaalka tan looma daaweyn karo sida dharka dibadda, ama ugu yaraan maaha meelaha ugu qabow.
Maraykanka madow Bartamaha jiilaalka waxaa guud ahaan lagu xiraa jaakad hoosteeda. Inkastoo marka uu jiilaalku dhamaado ay mar kale soo muuqan doonaan maadaama ay ku jiraan lebiskii aan maanta isugu nimid oo aan rajaynayno inay ku dhiiri galiyaan.
Blazer madow waa aasaas. Taas macnaheedu maaha inay lama huraan tahay. Waxaa jira kuwa aan noolaan karin maradaas la'aanteed; kuwaas oo mar walba hela sida loogu daro dharkooda. Oo yaa, liddi ku ah, ku dara iyaga oo keliya xaaladaha qaarkood.
Waxa cad in qofkasta oo ka faa'iidaysta maradaas uu ku samayn karo xaalado aad u kala duwan marka loo eego sida uu u kala duwan yahay. Oo waa in blazer madow uu aad ugu habboon yahay inuu buuxiyo muuqaal maalinle ah, laakiin sidoo kale mid ka mid ah habeenkii iyo xataa damaashaadka. Munaasabadahaas waxaan ku aragnaa inay ku xiran tahay dharka maqaarka ee maqaarka, dharka gaaban, ama surwaalka palazzo-style iyo kabaha cidhibta sare leh, ee madow.
Iyo maalintii? Ku darso a jiinis, funaanad tolan oo wanaagsan Kabaha turtleneck iyo canqowga ayaa noqda doorasho weyn. Laakiin isku dhafka leh jeansiinta ayaa ah mid aan xad lahayn. Waxa kale oo aanu u qaadan karnaa muuqaalkan mid isboorti ah annagoo ku sharadsanayna shaadhka dhididka ah, funaanadaha qaarkood iyo blazer weyn.
Surwaal maqaarka ah, funaanad cad ama ecru ah iyo kabo dhaadheer ayaa sidoo kale noqon kara tandem wanaagsan. Iyo dabcan suudh, kaas oo aad ku siin karto muuqaal aan rasmi ahayn oo leh turtleneck madow iyo shaati cad oo ka soo horjeeda. Waxaad leedahay a dhar tolsan madow ama cawl? Waxa kale oo aad isku dari kartaa jaakada madow ee tan, adoo ku daraya kabaha milatari ee qaabkaaga si aad u dhamaystirto.
Sawirro - @ lyu9mila, @xDayaannax, @iliridakrasniqi, @zinafashionvibe, @abdisalaam, @sophiesinacori, @thecarolinelin, @bartabacmode
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Blazer madow, kaarka duurjoogta ah sidoo kale xilliga qaboobaha
Motifs fudud oo lagu rinjiyeeyo darbiga qolka jiifka ee carruurta
Waa maxay adkeysiga Caadooyinka iyo tayada dadka adkaysiga leh